Kufuneka wenze ntoni ukuthintela ukuba nenkqayi | Amadoda aQinisekileyo
I-Alopecia okanye oko sikubiza ngokuba yimpandla lolunye uloyiko oluqhelekileyo lwamadoda, oqala usuku nosuku, nakweyiphi na imeko, iinwele ziyawa ngaphandle kokuba uqaphele. Ayinguye wonke umntu owenzeka ngendlela efanayo, okanye kwinqanaba elifanayo lokwehla, yiyo loo nto sinako ukwahlula Amanqanaba amathathu enkqayi:
Androgenic alopecia: Yeyona mpandla iqhelekileyo apho iinwele ziba zincinci kwaye iifollic ziba buthathaka. Ngale ndlela, i unyango lokulahleka kweenwele Kubalulekile ukuphucula iziphumo kwesi sigaba sokuqala, kuba bayayeka ukuwa kwaye bahlaziye iinwele ngaphambi kokuba kube semva kwexesha.
I-Alopecia kwiipatches: Yindaleko yangaphambili, yenzeka xa ukulahleka kweenwele kukwiindawo ezithile zesikhumba entloko ezinje ngesithsaba okanye umphambili. Unyango kweli nqanaba lusasebenza ekuhlaseleni olu hlobo lwempandla.
I-alopecia iyonke: Akukho nto yokwenza kwakhona kuba kukho ilahleko iyonke yentloko. Kule meko, kungcono ukushiya iinwele zichetyiwe ukunqanda amacala amabini entloko ngeenwele kwaye amanye engenanto.
Nceda uqaphele oko Ukulahleka kweenwele kungaqala nangaliphi na ixesha kwaye ukuba kwangoko iqala ukunyangwa, amathuba okuphumelela aya kubakho. Amaxesha amaninzi unobangela wenkqayi uhlala unxunguphalo noxinzelelo.
1 Iingcebiso ezi-6 ezisebenzayo zokuphepha ukuba nenkqayi
2 Ukuphulula iinwele, amahlakani amakhulu
Iingcebiso ezi-6 ezisebenzayo zokuphepha ukuba nenkqayi
Musa ukonqenaKuyinyani ukuba amaxesha amaninzi amadoda athambekele ekuhambisweni kwaye, ngaphezulu kwako konke, alibale ngonyango kunye nokuzikhathalela. Kubalulekile ukuba wenze kwangoko xa uqala ukuqaphela ukuba iinwele zakho ziqala ukuwa ukuze emva koko kungabikho kuzisola.
Iimveliso zeenwele kunye nonyango zinokukunceda kakhulu ngakumbi ukugcina iinwele kwaye zomeleze. Ukuba ingxaki yokuwa ingaphakathi, kubalulekile ukuba uye kubona ingcali ukufumanisa ingxaki yakho.
Libala iintsomi "Kungenxa yemfuza ndinenkqayi", iigeni zinokuba nefuthe, kodwa ayizizo zonke izinto. Icuba, amayeza athile, ukutya kunye noxinzelelo zezona zinto zidibeneyo zeenwele ezisempilweni.
Khathalela ukutya kwakho. I-Algae efana ne-hiziki kunye ne-arame, isesame emnyama, amaqanda, amandongomane, imbewu yejongilanga, ifayibha, ii-antioxidants, imifuno eluhlaza kunye nentlanzi, zizinto ezilungileyo zokudibanisa iinwele zakho kwaye zomise ukulahleka kweenwele. Olu hlobo lokutya luqulathe iivithamini, iiproteni kunye neeasidi ezinceda ukuba iinwele zingaphumi.
Sala kakuhle kwiziselo ezineswekile. Ngokufika kwehlobo, siye sithande ukusela ngakumbi kwezi ntlobo zeziselo. Pus kakuhle, nangona zisipholisa zinefuthe ngqo kwizintso zethu, ezibenza buthathaka kwaye ngenxa yoko iinwele zethu zibuthathaka.
Ishampu oyisebenzisayo. Ukuhamba rhoqo kweenwele akunamsebenzi kangako nakwiimveliso ozisebenzisayo. Kubalulekile ukuba usebenzise ishampu ekhuthaza ukuhamba kwegazi kwaye ucoce isikhumba se-sebum, kuba la mafutha avalela ipali yesikhumba sethu kwaye aphucula ukulahleka kweenwele.
Ukuphulula iinwele, amahlakani amakhulu
Ukuphulula iinwele Basebenza ngokusebenza kweefollic kunye nokuthintela ukulahleka kweenwele. Unokubenza ngokwakho ngomonde omncinci. Baza kukunceda ukuba ube nemizuzu eli-10 apho unqamle kwaye ucinge ngawe. Kulula kakhulu ukwenza njalo ungalahli iinkcukacha:
Hlala esitulweni intloko ijonge phambili kancinci. Ngezikhonkwane zeminwe, ungaze uzenze iinzipho, Qalisa ukwenza iintshukumo kwizangqa ezincinci kwaye ngaphandle kwengxabano, egubungela yonke indawo yesiseko sokhayi. Uya kuqaphela uvakalelo lobushushu, kuba ukujikeleza kwegazi kusebenze kancinci kancinci kwaye kuya kukunika olo luvo lokuqokelelana kwegazi entlokweni. Ukusuka apho hambisa iintshukumo eziya kwinxalenye ephezulu yekhakhayi uhlala usebenzisa iintshukumo ezijikelezayo.
Xa sele ufikelele encotsheni yekhakhayi, usasaza izandla zakho kwaye shukumisa iminwe yakho phezu kweetempile nebunzi kude kube kugqunywe yonke intloko.
Ukuphulula Kufuneka ihlale malunga nemizuzu eli-10Ukuba ingaphezulu kancinci, ingcono kunokuba ibhetele, kwaye uya kuqaphela ukuba xa ugqibile uyakufumana ubushushu kwindawo kwaye ngokuqinisekileyo ububomvu bentloko, eya kukunceda ukonyusa ukukhula kweenwele zakho.
Ukugqiba ukuthambisa, Hlamba intloko ngamanzi adikidiki kunye neyeza lakho lonyango nge-massage elula ukuze ingene ngcono ngakumbi.
Njengengcebiso, ungaze usebenzise iinzipho zakho xa usenza umyalezo wakho, sukutsala iinwele zakho kwaye uphakamise iincam zeminwe yakho ukuzisusa entloko. Kubalulekile ukuba i-massage yeenwele yenze ngeenwele ezomileyoKuba ukuba uyayenza ngeenwele ezimanzi, kulula ukuba ivele ngenxa yokuba amanzi ethambisa ubuhlanti bezinwele.
Recuerda que konke kuxhomekeke kuwe, kunye nokutya okungalinganiyo, uxinzelelo, utshintsho lwemozulu, ucoceko olubi kunye necuba, zichaphazela umgangatho kunye nempilo yeenwele zakho ezibangela ukuba ziwe ngakumbi akukho nto ilunge ngaphezu kwemikhwa esempilweni yokuqinisa iinwele zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Kufuneka wenze ntoni ukuthintela ukuba nenkqayi
Isuti enemibala emine kule ntwasahlobo-ihlobo 2013
Iingcebiso zokunxiba isitayile se skater